Ririnina any Bali " Journey-Assist - Ahoana ny ririnina any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Ririnina any Bali
Matetika ny olona avy any amin'ny mari-pana dia tsy mila hafana sy hazavana amin'ny masoandro. Izany dia mamporisika ireo manana fotoana toy izany handeha ho amin'ny ririnina any amin'ny toerana izay mafana ny masoandro mandritra ny 300 andro fara-fahakeliny mandritra ny taona. Indonezia ary indrindra, ny nosy Bali dia isan'izy ireo. Ho fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika, azonao atao ny mampifanaraka ny eritreritrao sy ny fihetseham-ponao, firaisana miaraka amin'ny natiora, fandriampahalemana, mahita fialamboly vaovao, mankafy ny fijery. Na izany aza, manapa-kevitra ny handany ny ririnina any Bali, ilaina ny manomana tanteraka azy mba hahazoana antoka ny fihetseham-po tena tsara ho an'ny tenanao.
Ny andro ririnina any Bali
Aiza ny ririnina any Bali
Visas mankany Bali
Ohatrinona ny vola ilaina amin'ny ririnina any Bali
Weather in Bali efa volana maromaro!
Mandritra ny volana vitsivitsy misy ny ririnina, dia maharitra any Bali ny antsoina hoe Bali. orana. Amin'izao fotoana izao, ny monsoons dia mankany amin'ny nosy ary mitondra fandroana miaraka aminy. Ny ankamaroan'ny orana dia miseho amin'ny alina, ary amin'ny maraina amin'ny rivotra dia mahita ahitra kely ianao. Indraindray ny orana amin'ny andro, maharitra 2 ora, ary mihena avy hatrany ny rano, satria matetika amin'ny Bali ny mari-pana amin'ny volana ririnina, manomboka amin'ny +28 ka hatramin'ny 33.
Ao amin'ireo tanàna toy ny Jimbaran, Kuta sy Seminyak, dia orana indrindra ny volana Janoary sy Desambra. Amin'ity volana ity, misy rivotra mafana be sy mafana, ary koa ny rivotra mahery. Mandritra izany fotoana izany, ny rivotra dia tsy mihamalemona amin'ny volana febroary, ary ny ranomasina ranomasina amin'ity volana ity dia feno rahona.
Any Nusa Dua, volana desambra no betsaka indrindra ny volana desambra, fa ny volana Janoary sy Febroary kosa dia maina.
Toy ny fitsipika, rehefa avy ny orana matetika ao anatin'ny 2-4 andro, dia misy mangatsiaka maharitra maharitra 5 andro. Amin'ny ankapobeny, ny toetr'andro amin'ny ririnina any Bali dia tsy mijanona, fa misy ny fisafidianana faritra mahatsara kokoa mandritra ny fe-potoana iray.
Raha raisina ny tanjon'ny dia dia azonao atao ny misafidy toerana mahafinaritra eto amin'ity nosy ity. Hatramin'ny vanim-potoanan'ny ririnina any Bali ny vanim-potoanan'ny orana, misy rivotra mahery sy hamandoana avo any amin'ny faritra rehetra.
Any amin'ny faritra atsimon'i Bali, mitombo ny hamandoana noho ny hoe misy ranomasina any akaiky. Any Denpasar sy Kut dia mety hisy 19 andro misy orana mandritra ny iray ririnina. Any Ubud, mafana kokoa ary malefaka kokoa, ny mari-pana eto matetika dia +33. Na ny rahona sy ny orana, ny fiakodia amin'ny masoandro eto dia mety ho tsara toy ny amin'ny fotoanan'ny maina.
Ny rivotra mahery, indrindra ny atsinanan'i Bali, dia manamboatra onja tsara ho an'ny onja.
Raha tsy ny hilentika ihany no tianao, fa koa milomano, Sanur miaraka amoron-tsiraka milamina indrindra manerana an'i Bali dia mety kokoa aminao. Tena madio sy mafana ny rano eto, ambany ny onjan-drano. Na amin'ny vanim-potoana maina, dia tena malaza amin'ny mpizahatany tonga miaraka amin'ny ankizy, toy ny zokiolona ihany koa i Sanur, noho ny tarehony.
Toerana tsy dia be orana i Ubud, fa noho ny halaviran'ny morontsiraka sy toerana fialamboly vitsivitsy, tsy ny mpizahatany rehetra no tia azy. Na izany aza, eto ianao dia afaka manao fialamboly ara-kolontsaina, fampivoarana tena, fanarenana.
Ireo olompirenena ao Rosia, Ukraine, Belarosi ary firenena hafa USSR teo aloha (ary koa firenena hafa 154 eran'izao tontolo izao) dia mamela alalana malalaka amin'ny fahazoana visa any Indonezia mandritra ny 30 andro. Apetraka eo amin'ny pasipaoro ilay hajia mety. Mba hanaovana izany, tsy maintsy manana pasipaoro ianao izay manan-kery mandritra ny 6 volana farafahakeliny manomboka amin'ny daty nahatongavany tany Indonezia, ary tapakila tapakila.
Raha mikasa ny hijanona ela kokoa eto amin'ity firenena ity ianao dia afaka mangataka visa. Atao avy hatrany koa izany rehefa tonga any amin'ny seranam-piaramanidina. Ity visa ity amin'ny fahatongavany dia manan-kery hatramin'ny 60 andro. Na izany aza, olom-pirenena lavitra ny firenena rehetra no afaka mandray izany. Avy amin'ny USSR teo aloha, ny olom-pirenen'ny Federasiona Rosiana, Belarus, Letonia, Litoania, Estonia ary Armenia ihany no afaka mangataka visa rehefa tonga. Ho an'ny olom-pirenena, ohatra, Okraina, tsy azo atao izany. Ankoatr'izay, afaka 30 andro dia tsy maintsy havaozina ao amin'ny biraon'ny fifindra-monina ity visa ity. Ny antontan-taratasy hahazoana izany dia mitovy amin'ny tombo-kase ao amin'ny pasipaoro, izay manome zon'ny fijanonana tsy misy visa. Ny vidin'ny visa toy izany dia $ 35.
Ho an'ireo izay mikasa ny hijanona any Bali sy amin'ny ankapobeny any Indonezia mandritra ny 2 volana mahery, misy fomba 2. Ny voalohany dia ny fitsangatsanganana any amin'ny faritanin'ny fanjakana hafa miaraka amin'ny fiverenana any Indonezia andro vitsivitsy taty aoriana. Ity fomba ity dia antsoina hoe "visa-run". Izy io dia mety ho an'izay te-hitsidika, ankoatr'i Indonezia, koa ireo firenena hafa any Azia atsimo atsinanana. Safidy iray hafa ny fahazoana visa mpizahatany any amin'ny firenenao alohan'ny dia. Ny olom-pirenenan'ny Federasiona Rosiana sy Belarus dia afaka mahazo visa toy izany any amin'ny masoivoho Indonezia hatramin'ny 180 andro. Ny vidin'ny fisoratana anarana dia 50 $. Mba hanaovana izany dia mila mandefa pasipaoro ianao, izay manan-kery mandritra ny 6 volana farafahakeliny hatramin'ny daty nahatongavany tany Indonezia, sary 2 (3 hatramin'ny 4), kopian'ny famandrihana tapakila amin'ny lafiny roa ary kopian'ny famandrihana hotely. Ny mponin'i Okraina dia afaka mangataka visa fizahan-tany hatramin'ny 60 andro miaraka amin'ny lalantsara manan-kery 90 andro. Navoaka tao amin'ny Consulat Indoneziana any Kiev. Mba hahazoana izany, ankoatry ny antontan-taratasy etsy ambony, ianao dia tsy maintsy manome fiantohana ara-pitsaboana mandritra ny fotoana fijanonana rehetra any Indonezia sy taratasy fanamarinana koa avy amin'ny banky, manaporofo ny fisian'ny $ 100 isan-olona farafahakeliny ao amin'ny kaonty ho an'ny andro tsirairay amin'ny fiomanana kasaina hatao any Indonezia, miaraka amin'ny sombiny amin'ny fifanakalozana ho an'ny 3 volana lasa izay ary karatry ny mpiasan'ity banky ity.
Ohatrinona no ilaina amin'ny ririnina any Bali
Ny ririnina any Bali dia tsy vanim-potoana fizahan-tany, ka amin'ny volana ririnina ny vidin'ny trano, sakafo, fitsangatsanganana dia latsaka raha oharina amin'ny vanim-potoana avo. Nefa alohan'ny fialantsasatry ny taona vaovao dia miakatra ny vidiny.
Ny sarany eo ho eo amin'ny olona roa amin'ny ririnina any Bali, raha mandinika ny vidiny dia toa izao:
Trano kely manofa trano iray kely lafo 3 dolara (500 dolara eo ho eo) isam-bolana.
Raha mitsidika kafe (natao indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana, fa tsy mpizahatany) ary trano fisakafoanana lafo vidy, ny vidin-tsakafo dia mitentina 6 dolara Indonezia ($ 000) eo ho eo isam-bolana. Mazava ho azy fa miaraka amin'ny vokatra fivarotana tena sy mahandro ao an-trano dia hivadika ho mora kokoa izany.
Mitentina 600 rupees Indonezia isam-bolana ($ 000) ny fanofana bisikileta tsy lafo.
Mitentina 100 dolara Indonezia (000 dolara) ny Internet eto.
Ny vidin-javatra hafa, ao anatin'izany ny souvenir, ny akanjo, ny fandaniana tsy ampoizina sasany dia mitentina rupees Indonezia 2 $ isam-bolana.
Raha ny vokatra izany dia mitentina 12 tapitrisa rupees Indonezia (kely 300 $ isam-bolana). Noho izany, mandritra ny 000 volana dia tokony ho 900 rupe ao Indonezia ($ 3) no takiana. Manampy eto ihany koa ny tapakilan'ny fiaramanidina, ny vidin'ny visa ary ny fiantohana, dia azontsika (raha avy miala any Moskoa) ireto manaraka ireto:
Tapakila 4 avy any Moskoa mankany Bali ary miverina - 1200 $;
visa ho an'ny roa: visa rehefa tonga, ny fanitarana azy ary ny "visa run" mankany Malaysia (Kuala Lumpur), dia mitentina 35 + 25 + 100 * 2 = 320 dolara;
fiantohana ho an'ny roa - 150 $.
Araka izany, ny vidin'ny farany amin'ny ririnina mandritra ny 3 volana ho an'ny olona roa dia $ 4410.
Zava-dehibe ny fiheverana fa mihena kely ny vidiny amin'ny toerana samihafa any Bali.
Ny nosy dia tokony hoentina amina dolara amerikana, izay azo ovana amin'ny rupees any Indonezia amin'ireo fifanakalozana fifanakalozana eo an-toerana. Marihina fa ny banknotes amin'ny antokom-pivarotana $ 100 sy $ 50 amin'ny tahan'ny hafa tsara kokoa noho ny banky amerikana kely kokoa (ny sasany dia tsy mandray azy ireo amin'ny toerana maro). Ambonin’izany, ny volavolan-dalàna mora ketraka na antitra (mandra-pahatongan'ny 2006) dia tsy afaka manaiky ihany koa.
Fa raha te hitondra vola amina vola be dia tsy no ampiasaina. Ny azo antoka kokoa dia ny manana karatra banky izay misy vola ao amin'ny kitapom-pirenena amin'ny firenenao. Tsy ho sarotra aminy ny hanaisotra ao amin'ny ATM amin'ny rupees indoneziana. Natao izany, ho fiarovana ny karatra manokana, amin'ireo karatra vola an-dry zareo amin'ireny ATM ireny izay hita ao amin'ny tranon'ny banky. Ary aza manangona vola be amin'ny carte banky iray, azo antoka kokoa ny manana karatra maromaro.
Tsy ilaina ny manangona akanjo be dia be, satria amidy eny rehetra eny any Bali izy ireo, ary matetika dia tsy dia lafo loatra. Noho izany, tsy misy dikany ny valizy be loatra.
Ho an'ny ririnina any Bali dia mila:
Akanjo maivana. Ireo dia palitao miaraka amin'ny akanjo matevina ary 2-3 t-shirt. Ho an'ny dia an-tongotra sy ny trano fisakafoanana dia afaka mandray pataloha maivana sy lobaka (ho an'ny lehilahy) na akanjo maivana (ho an'ny vehivavy). Raha mikasa ny hamonjy ny ala mikitroka ianao na amin'ny havoana mangatsiaka dia tokony handray akanjo manana akanjo lava, ary koa akanjo mamy. Mba hahafahana manatrika tempoly, ary koa hiditra amin'ny andrim-panjakana mpitantana, dia ilaina ny akanjo ary malalaka.
Kiraro mampitony. Ireo no kapa, flip flops eny amoron-dranomasina ary miala sasatra ao an-tanàna, mpitsangatsangana jiro ho fitsangantsanganana any an-tendrombohitra na any anaty ala. Ny morontsiraka sasany any Bali dia rakotra vatolampy ary haran-dranomasina ao ambany, noho izany antony izany dia ilaina ny kiraro vita amin'ny vy milomano amin'ny fialam-boly ao.
Fiomanana ara-pitsaboana. Raha mila fanafody lalandava ianao, dia ento miaraka aminao any Bali. Ny analgesika, antipyretika sy fanafody malaza hafa dia azo vidiana amin'ny fivarotam-panafody any an-toerana.
Vokatra fiarovana amin'ny masoandro. Mandritra ny andro fitsaharana voalohany dia misy risika ny hazandrano. Noho izany antony izany dia mila maka vokatra miaro ny hoditra ianao.
Appliances. Ireo fitaovana telefaona, fitaovana fakana sary, fakan-tsary dia tena ilaina, satria ny Bali dia manana endrika tsara tarehy. Misy toerana maro ahafahanao maka sary mahafinaritra.
Documents. Tena mila pasipaoro, tapakila fiaramanidina, voucher hotel, fiantohana.
Memo to fizahan-tany any Bali
Bali - faritanin'i Indonezia
Renivohitra - Denpasar
Teny ofisialy - indonezianina
Weather Map (Interactive)
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany dia mahita ny toetr'andro any Bali ankehitriny. Ao amin'ny faran'ny fidirana ny zoro dia ny fandaharam-potoana ahafahanao mandroso, ka noho izany ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Ary koa, afaka manindry roa na manindry azy ianao amin'ny fitsangatsanganana rehetra ahitanao ny toetran'ny toetr'andro ao. Na jereo ny vinaviny amin'ny hoavy.
Ny lokon'ny tsipika sarintany dia manondro mazava ny toetrandro any amin'ireo faritra ireo.
Ao amin'ny zoro havanana ambony dia misy bokotra iray hidirana amin'ny menio widget izay ahafahanao misafidy karazana fampahalalana tianao haseho ilay widget. (rivotra, oram-baratra, orana, rahona, onja, tsindry avy amin'ny atmosfera, onja, vovoka, haavon'ny CO2 ary zavatra ilaina hafa). Ny mari-pana dia ny mari-pana amin'ny rivotra.